बैशाख २६, काठमाडाैं । शुक्रबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे राजीनामा माग गरिएकाे छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेेसका सभापति सेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई लगाएतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कडा आलोचना समेत गरे । देउवाले सिंगो देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेलामा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानको मूल भावना विपरित दुइवटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर अलोकतान्त्रिक एवं गैह्र जिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले एक सांसदको अपहरण प्रकरणमा नै न कुनै रुपले सरकारको संलग्नता देखिएके पनि देउवाले आरोप लगाए । उनले यो घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कार्वाही गर्न माग समेत गरे । देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाई सकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा ठीक हुने सुझाव दिए।
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जीर्ण शरीरलाई आराम दिनआग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘अरु अरुलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा आत्मलोचना गर्नुपर्छ, यो देशमा ३८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, कुन प्रधानमन्त्रीलाई कसले सम्झि रहेका छन् त्यो थाह छैन तर कुर्सीमा बसेका पनि जनताले सम्झने खालको काम गर्नुपर्छ ।’
६० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुमध्ये एक चौथाइ नेपाली अलपत्र बन्ने उनले १५ देखि २० लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अवस्था रहेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘हामीले तिमी नआउ भन्न मिल्दैन, आउन भनिएन भने संविधान विपरित कार्य हुन्छ । ७२ लाख श्रमिकमध्ये ६० प्रतिशत अस्थायी खालका श्रमिकहरु छन् त्यसको बेहाल छन् । ‘ उनीहरु रुदै रुदै घर फर्केको दृश्य टुलुटुलु हेरेको बताउँदै उनले जेष्ठ नागरिकको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।
आफूहरु आफ्नो सांसद अपहरण गरेको भनि प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदा उजुरी नलिएको प्रति पनि उनले गुनसो गरे । नेता भट्टराईले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न आग्रह गरे । विप्लव समूहमाथि लगाइएको बन्देज खुल्ला गर्न पनि उनले आग्रह गरे । सानातिना मुद्दा लगाएर निलम्बनमा राख्ने काम गर्न नहुने बताउँदै उनले हरिनारायण रौनियारलाई गरेको निलम्बन फकुवा गर्न पनि आग्रह गरे ।
नेकपाकै सांसद सुवाचन्द्र नेम्वाङले मागे सरकारको जवाफ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङले संसदको अपहरण प्रकरणबारे सरकारले संसदमा यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संसदको छैठौ अधिवेशनमा दलको तर्फबाट मन्तव्य राख्दै उनले सांसद अपहरणको घटना के भएको हो ? भन्दै सरकाले यसवारे जानकारी दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘भएको के हो ? यथार्थ कुरा आउछ भन्ने हामी विश्वास राख्छौं ।’ उनले आफ्नो दल कुनैपनि प्रकारको अपराधको पक्षमा नभएको भन्दै जवाफदेहीता र पारदर्शिताका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने बताए ।
उपनेता नेम्वाङले मन्तव्यका क्रममा शान्ति प्रकृयाका केही काम बाँकी रहेपनि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर यसै अधिवेशनबाट उक्त काम पूरा भएको घोषणा गर्न सकिने बताए । उनले कोरोनाविरुद्ध लड्न सवै दल एक ठाउमा उभिने विश्वास व्यक्त गर्दै कोरोनाले धेरै क्षति पुर्याएको र उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सवै मिलेर आधार तयार गर्नुपर्ने साझा दायित्व भएको बताए ।
दाङमा आज एकै दिन १५ जना संक्रमित थपिए